Maamulka Galmudug oo war-saxaafadeed kasoo saartay dagaalkii deegaanka Af-urur – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka Galmudug oo war-saxaafadeed kasoo saartay dagaalkii deegaanka Af-urur
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxaa si kulul lagu cambaareeyay weerarkii dagaalyahanada Al-shabaab ay saakay ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin degaanka Af-urur oo qiyaastii 100-km u jirta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inay ku geeriyootay in kabadan 50 askari oo ka maamulka Puntland oo uu ku jiro taliyaha ciidamada iyo ku-xigeenkiisa, waana qasaarihii ugu badnaa oo ciidamada Puntland kasoo gaaray hal weerar oo ciidankooda lagu qaaday.
Hadaba nuqul ka mid ah war-saxaafadeedka oo nasoo gaaray ayaa u qornaa sida hoos ku xusan:-
Dowlada goboleedka Galmudug waxay ka xuntahay falkii argagixisnimo ee kooxda Al-shabaab ku qaaday deegaanka Af-urur oo hoostaga gobolka Bare ee dowlad goboleedka Puntland, nooca falkaan oo ah mid ay nabad diidku had iyo jeer isku dayaan inay ku dhibaateeyaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ciidan iyo shacabba.
Dowlada goboleedka Galmudug waxay diyaar u tahay inay garab istaagto walaalahood Puntland si la isaga kaashado kooxaha Al-shabaab iyo Daacish oo mar walba hortaagan nabad galyada iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, dowlad goboleedka Galmudug waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada dalka iyo dhammaan beesha caalamka in si isku mid ah la isaga wada kaashado sidii loo cirib tiri lahaa kooxaha nabad diidka ah ee dhibaatada ku haya horumarka iyo nabad galyada ummadda Soomaaliyeed.